Kutheni Sigula Nje? | Oko Kuthethwa YiBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
Ngaba uThixo ukukhathalele oko sikwenza kwimizimba yethu?
“Musa ukuba phakathi kwabasela iwayini kakhulu, phakathi kwabadli benyama abangamadla-kudla.”—IMizekeliso 23:20.
KUTHENI KUBALULEKILE NJE?
IBhayibhile asiyoncwadi yezempilo; ibe ayisichazeli yonke into esimele siyenze nesingamele siyenze. Sekunjalo, kuya kukunceda ukufunda iBhayibhile ukuze uqonde indlela uThixo ayijonga ngayo impilo.
Iivesi ezininzi zeBhayibhile zisenza sibone indlela uThixo ayijonga ngayo indlela esiyiphatha ngayo imizimba yethu. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi asifanele senze izinto eziyingozi, njengokunxila nokuzingxala ngokutya. (IMizekeliso 23:20) KuMthetho uThixo awawunika amaSirayeli amandulo kwakukho namasolotya awayenzelwe ukunqanda ukwanda kwezifo nokuzithintela. UMthetho wawunayo nemiyalelo engqalileyo yokuthintela iingozi. (Duteronomi 22:8) Ngoko kuyacaca ukuba iBhayibhile isikhuthaza ukuba siyikhathalele imizimba yethu size sikhusele nempilo yethu.
IBhayibhile ithi kutheni sigula nje?
“Isono sangena ngamntu mnye ehlabathini nokufa ngaso isono.”—Roma 5:12.
OKO KUTHETHWA NGABANTU
Abantu abaninzi bacinga ukuba sigula ngenxa nje yelishwa elithile elenzeka ekuqaleni kwembali yabantu. Abanye bacinga ukuba siguliswa yimimoya emdaka.
IBhayibhile ithi sigula ngenxa yesono sika-Adam. (Roma 5:12) Ngaphambi kokuba bone, uAdam noEva babeyimiqabaqaba. Babesazi ukuba baza kufa ukuba bayamona uThixo. (Genesis 2:16, 17) Sekunjalo, bona ngabom baza baphulukana nobomi obufezekileyo. *
UAdam noEva basosulela ngokungafezeki emva kokuba bonile. Ngenxa yoko, nangona sizama ukuphelisa izifo, siyagula.
IBhayibhile ithi ukuba ubuyela kuThixo ngokuthi uthobele imithetho yakhe, ekugqibeleni uza kuphila ube ngumqabaqaba kwiparadesi eza kuba lapha emhlabeni. (Isaya 33:24) UThixo uthembisa ukuba uza kuziphelisa zonke iintlungu, ukugula nokufa.—ISityhilelo 21:3, 4.
Ngaba iBhayibhile iyakwalela ukusetyenziswa kwamayeza?
“Kubantu abasempilweni akufuneki gqirha, kodwa kwabagulayo uyafuneka.”—Mateyu 9:12.
Abanye abantu bathi umntu ogulayo ufanele athandazelwe kunokuba asiwe kugqirha okanye asezwe amayeza.
Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, uThixo wavumela abantu ababesazi amayeza ukuba babe yinxalenye yabantu bakhe. (Genesis 38:28; Kolose 4:14) Akukhonto iseBhayibhileni enokusenza sicinge ukuba uThixo wayengakuthandi ukusebenzisa kwabo amayeza nezinye iindlela zokunyanga. Phofu noYesu wavuma ukuba, “kubantu abasempilweni akufuneki gqirha, kodwa kwabagulayo uyafuneka.”—Mateyu 9:12.
Noko ke, iBhayibhile ayithi sifanele sisebenzise naluphi na uhlobo lonyango. Ngokomzekelo, iBhayibhile ikuchasile ukuphiliswa ngabathandazeli okuxhaphakileyo namhlanje. Kwelinye icala, iindlela zonyango ezinento yokwenza nemimoya zichasiwe nguThixo. (Galati 5:19-21) Xa egula, kuya kuba kuhle ukuba umntu adibane nabezonyango ukuba bakho, ngaphandle kokuba olo nyango luchasene noko kuthethwa yiBhayibhile.
^ isiqe. 10 Kweli nqaku sisebenzisa igama elithi “ukufezeka” nelithi “imfezeko” ukuze sibhekisele kwindlela ababephile qete ngayo uAdam noEva xa uThixo wabadalayo, bengaguli, bengenazifo yaye kungekho kufa.
Ngaba UmKristu Unokulwamkela Unyango?
Ngaba uThixo uyikhathalele indlela esithanda ukunyangwa ngayo?
Imbono YeBhayibhile Ngempilo Entle
Iindlela Zokuphucula Impilo Yakho
Indlela Yokufumana Ulonwabo—Ukuba Sempilweni Nokulungela Zonke Iimeko